Manel Loureiro: onye ka ọ bụ na akwụkwọ ka onye edemede a dere | Akwụkwọ ugbu a
Isi iyi foto Manel Loureiro: Libertaddigital
N'ezie aha Manel Loureiro maara gị nke ọma n'ihi na ị nụla ya. Ọ bụrụ na ị na -agụsi akwụkwọ ike, ị nwere ike gụọ ụfọdụ n'ime ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ị bụ onye a na -eme mgbe niile na telivishọn, redio ma ọ bụ pịa, ị nwere ike hụ ya. Ma ọ bụ na onye edemede a, odeakụkọ na onye ọka iwu amala ka esi eme mkpịsị akwụkwọ (na egbugbere ọnụ) ọrụ ya.
Ma, Ọnye na -bụ Manel Loureiro? Kedu akwụkwọ ndị ị dere? Ọ bụrụ na ị nwere mmasị izute onye edemede a, mgbe ahụ anyị ga -egosi gị ihe niile anyị maara gbasara ya.
1 Ọnye na -bụ Manel Loureiro
2 Kedu akwụkwọ ndị Manel Loureiro dere
2.1 Apọkalips z
2.2 Thebọchị gbara ọchịchịrị
2.3 Egwuregwu Ocheeze: akwụkwọ dị nkọ dịka igwe Valyrian
2.4 Iwe ndị ezi omume
2.5 Onye njem ikpeazụ
2.6 Ikpa ọkụ
2.7 Iri abụọ
2.8 Ọnụ ụzọ ahụ, ihe egwu kacha dị omimi Manel Loureiro
Ọnye na -bụ Manel Loureiro
A mụrụ Manel Loureiro na Pontevedra na Disemba 30, 1975. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Iwu na Mahadum Santiago de Compostela, yabụ na ọ bụ onye ọka iwu. Agbanyeghị, n'oge ụbọchị nwata akwụkwọ ya, o nwere ohere ịbịakwute ọrụ metụtara telivishọn. Na mbụ o mere ya dịka onye na -egosi ihe ngosi, mana emesịa o mesoro edemede ahụ ma ọ bụ mgbe ọ matara na ezigbo agụụ ya abụghị iwu, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ telivishọn, kama ide ihe.
N'ezie, ọ naghị ewepụ nke ahụ nọgide na -emekọ ihe na mgbasa ozi. Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị na ọ bụ onye na -ekwu okwu na Galicia Television, ugbu a ọ na -arụkọ ọrụ na akwụkwọ akụkọ dịka La voz de Galicia, akwụkwọ akụkọ ABC, El Mundo, magazin GQ kamakwa na redio, ọkachasị na Cadena Ser na Onda Cero. Ị nwedịrị ike hụ ya na telivishọn, ọkachasị na mmemme Cuarto Milenio, na Cuatro, ebe o nwere ngalaba oge kemgbe 2016.
Akwụkwọ akụkọ mbụ ya sitere na blọgụ. Ma ọ bụ na ọ raara onwe ya nye ide akwụkwọ n'oge ya na, nke a bụ ihe ịga nke ọma nke onye a, yana ihe karịrị nde na ọkara ndị na -agụ akwụkwọ ntanetị, ọ kpatara na, mgbe ọ gwụchara, e bipụtara ya. Ọ tụghịkwa anya ya; N'oge na -adịghị anya ọ bụ onye na -ere ahịa nke ukwuu, nke mere ka ọtụtụ ndị nkwusa gee ntị na onye edemede a na -apụta na onye na -adọta ọtụtụ nlebara anya, ọ bụghị naanị n'etiti ọha Spanish, kamakwa mba ụwa. Ọ bụ ya mere, mgbe akwụkwọ mbụ ahụ, Apọkalips Z, ọtụtụ ihe ndị ọzọ kewapụrụ n'ime ọtụtụ afọ pụtara (naanị na 2011 ka o wepụtara akwụkwọ abụọ).
Dịka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga -agwa gị na site na akwụkwọ akụkọ mbụ ya enwere ọbụna egwuregwu bọọdụ. Enwetara ego a site na igwe mmadụ mgbe e bipụtara akụkọ a.
Manel Loureiro nwere ike ịdị mpako n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị edemede Spanish ole na ole jisiri ike nọrọ na ndepụta akwụkwọ kacha ere ere na United States, ihe adịghị mfe inweta.
Kedu akwụkwọ ndị Manel Loureiro dere
El Akwụkwọ mbụ Manel Loureiro bipụtara bụ Apọkalips Z, na 2007, site na ụlọ obibi akwụkwọ Dolmen (ọ bụ ezie na afọ atọ ka e mesịrị, ụlọ mbipụta ọzọ, Plaza & Janés) weghachitere ya. Site n'oge ahụ, ebe ọ hụkwara ihe ịga nke ọma o nwere, ọ malitere iwepụta oge ka ukwuu ide ihe, na ọtụtụ afọ, akwụkwọ ndị ọzọ o dere na -abịarute. Anyị na -enyocha ha.
Mmepeanya adịghịzi adị.
Enweghị ịntanetị. Enweghị telivishọn. Abughi mobile.
Enweghịzi ihe ọ bụla ga -echetara gị na ị bụ mmadụ.
Ugbu a, ọ bụ naanị otu ihe mgbaru ọsọ fọdụrụ: BUR ndu.
Otu a ka akụkọ si amalite ebe nje buterela na -enweghị mgbochi n'ime ụwa niile wee gbuo onye ọ bụla bu ya. Nsogbu bụ na, mgbe awa ole na ole gasịrị, nwoke ahụ nwụrụ anwụ ga -adị ndụ ọzọ wee mee ya n'ụzọ kacha ike.
Na Spain, onye ọka iwu na -eto eto na -ahụ maka idobe akwụkwọ edetu nke ọ na -edetu ihe niile ọ na -ahụ n'ụbọchị ya niile. Ruo mgbe ha batara n'ime ụlọ ya na ọ ga -agbaga Galicia, naanị ugbu a ọ nwere aha ọzọ: Apọkalips Z.
Thebọchị gbara ọchịchịrị
Ndị lanarịrị Apọkalips Z jisiri ike rute agwaetiti Canary, otu n'ime mpaghara ikpeazụ echebere na Undead. Mana ihe ha na -ahụ ebe ahụ bụ steeti ndị agha na -etinye aka na agha obodo, ọnụ ọgụgụ ndị agụụ na -agụgbu na -enweghịkwa ihe ọ bụla nwere ike ịlanarị.
Ọ bụ akụkụ nke abụọ nke akụkọ mbụ ya, nke ọ napụtara nnapụta akwụkwọ akụkọ ya, nke mere ka Manel Loureiro nwee ihe ịga nke ọma, ma tinyekwa ya ọzọ na nsogbu na -agbalị ịzọpụta ndụ ya n'aka ndị nwụrụ anwụ.
Egwuregwu Ocheeze: akwụkwọ dị nkọ dịka igwe Valyrian
Ọ bụghị ya dere akwụkwọ a kpamkpam, ọ bụ naanị onye na-ede akwụkwọ yana, dị ka aha ya na-egosi, ọ na-ekwu maka usoro egwuregwu ocheeze na mmetụta nke usoro ahụ nwere.
Iwe ndị ezi omume
Ndị lanarịrị apocalypse zombie nwere ohere: otu n'ime ndị otu ahaziri ahazi fọdụrụ n'ụwa gbapụtara ha n'etiti oke osimiri. N'ịbụ ndị a manyere iso ndị nnapụta ha, ha rutere n'Ọwara Oké Osimiri Mexico, ebe yiri ka ọ na -eme nke ọma n'okpuru ọchịchị ọma nke onye ụkọchukwu dị omimi.
Ọ bụ iheakwụkwọ ikpeazụ nke Mkpughe Z, ebe onye ode akwụkwọ tinyere nsogbu ọzọ otu ndị lanarịrị na -anwa ịlanarị n'ime ụwa nke na -emewanye ihe ike. Ọ bụ ezie na mmadụ amụtabeghị ihe ma nwee oke agụụ, onye ụgha na onye aghụghọ, yabụ onye isi na ndị enyi ya ga -agba mbọ imeri ihe mgbochi ọzọ.
Onye njem ikpeazụ
Ọgọst 1939. Otu nnukwu ụgbọ mmiri nke aha ya bụ Valkirie pụtara n'Oké Osimiri Atlantic. Ụgbọ njem ochie na-achọta ya na mberede ma dọkpụrụ ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, mgbe ọ chọpụtara na ọ bụ naanị nwa ọhụrụ dị ọnwa ole na ole fọdụrụ ... na ihe ọzọ na-enweghị onye ọ bụla nwere ike ịchọpụta.
Ihe omimi nke, Afọ 70 ka e mesịrị, ọ ka na -enye ọtụtụ mmadụ nsogbu, ruo na onye ọchụnta ego kpebiri na ọ ga -eweghachi ụgbọ mmiri ahụ ka ọ dị ndụ wee soro otu ụzọ ahụ o mere n'oge gara aga na -achọ azịza nke ihe mere. Ma n'ezie, ndị nọ n'ụgbọ ahụ ga -ama nke ọma iji gbochie otu ihe ahụ ime ọzọ.
Ndụ Cassandra fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke ruo ụbọchị ọ nwere ihe ọghọm okporo ụzọ dị ịtụnanya nke mere ka ọ nọrọ n'ụra. Ka izu ole na ole gachara, na mgbe ọ gbakechara n'ụzọ ọrụ ebube, Cassandra chọpụtara na ụwa ya agbanweela kpamkpam: mmadụ amalitela ịgbaso ụlọ ya na ezinụlọ ya, ọ na -atakwa ahụhụ na -esochi ya nke ọ na -enweghị ike ịchịkwa.
Onye bu nwanyi ọbụghị naanị na ọ bụ nwanyị nke na -eche na ya enweghị ike ịchịkwa ndụ ya, Kama, "mkpagbu" a jupụtara na ime ihe ike, igbu ọchụ na ikpe ziri ezi na -achọ ya pụtara na ọ maghị ihe na -eme. Kpachara anya, n'agbanyeghị na ọ dị ka onye na -eme mkpọtụ, a na -edepụta ya dị ka egwu (anyị agaghị agwa gị ihe kpatara ya).
N'ebe a Manel Loureiro na -achọ ime ka onye na -agụ ya sonye na arụmụka gbasara ihe ị ga -adị njikere ịchụ iji chebe ndị ị hụrụ n'anya.
N'oge ahụ, ọ nweghị onye ma ihe na -emenụ. Ewezuga na akụkụ buru ibu nke mmadụ gburu onwe ya n'ime ụbọchị ole na ole. N'ime ndị lanarịrịnụ bụ Andrea, nwa agbọghọ dị afọ iri na asaa, nwa mgbei na nnukwu ihe ncheta ya. Site n’oge ahụ, naanị ihe o chetara bụ etu esi manye ya n’ụgbọ ala ndị agha jupụtara na ndị nkịtị na-atụ ụjọ na-agba ọsọ n’ihi otu ihe egwu ahụ.
una akụkọ apocalyptic nke ndị odide ahụ na -edobe ihe nzuzo, ọ bụ ezie na ha onwe ha amaghị ya. Agbanyeghị na akwụkwọ ahụ malitere otu a, nke bụ eziokwu bụ na Manel Loureiro mechara banye n'ọdịniihu dị anya, nke ụwa gbanwere na ndị lanarịrị na ụmụ na -anwa ịlaghachi na '' ụkpụrụ '' n'ime mkpọmkpọ ebe nke bụbu mmadụ . Mana nke ahụ bụ mgbe ihe mechiri otu ahụ na -apụta ọzọ.
Ọnụ ụzọ ahụ, ihe egwu kacha dị omimi Manel Loureiro
Mpụ mpụ. Nwanyị na -achọsi ike ịzọpụta nwa ya nwoke. Manel Loureiro juru ya anya na ihe egwu dị na Galicia dị omimi na akụkọ ifo.
Yabụ ị nwere ike chịkọta ihe ị ga -ahụ na thriller a. Bụ nke e dere na Galicia n'ime ya ị ga -enwe onye uwe ojii, Raquel Colina, onye batara n'ala a ịchọ ọgwụgwọ nwa ya nwoke. Agbanyeghị, ọ na -agbaba na igbu ọchụ na mwepu nke yiri ka ọ nwere njikọ. Yabụ, n'oge nyocha gị niile, ọ bụghị naanị na ị ga -ahụ maka idozi okwu a, kamakwa ịnwa ịzọpụta ndụ nwa gị nwoke.
Ị na -amaja ịgụ nke ọ bụla ọrụ ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Manuel Loureiro
Ihe ọjọọ nke Corcira